Wenze isipho ephusheni: intombazane, owesifazane oshadile noma indoda.
Ephusheni benza isipho sokushada futhi banika indandatho. Kuyini lokhu?
Amantombazane amaningi abone ukuthi amenze kanjani isipho sokushada ephusheni aphapheme ngokungaqondakali afuna ukusinda kulo mcimbi. Kodwa umbono onjalo awusizo njalo uphathwe ngokuqondile nangendlela efanele. Ukuze uhumushe kahle iphupho lakho, udinga ukukhumbula yonke imininingwane yobuthongo kanye nemibono yakho engokomzwelo.
Kungani ukhumbula iphupho lokushada?
Kumantombazane amancane angakaboshwa ngumshado, umbono obusabusuku obunjalo uthembisa izinguquko zamakhadi empilweni yangempela. Kodwa kwabesifazane abashadile iphupho elinjalo cishe lizobhekwa njengesixwayiso. Udinga ukugxila kakhulu emazwini nasezenzo zakho, ukuze ungadonseli ukunakekelwa okungadingekile kumuntu wakho.
Le nsizwa encane, eyathola isinqumo somshado esivela ensizweni engazijwayele, ungaqiniseka ukuthi maduzane uzohlangana naye futhi ephapheme.
Uma wenza isiphakamiso sokushada ephusheni futhi wanikeza indandatho, empeleni okhethiweyo wakho uzizwa kuwe imizwa eqotho futhi eqinile. Futhi uma empilweni yakho uma nje kungekho muntu onjalo, ungaqiniseka ukuthi maduzane uzohlangana nomuntu ongeke abe ngumthandi wakho kuphela, kodwa futhi umngane weqiniso. Kodwa qaphela. Ekuqaleni, uzomcasula kakhulu lo muntu, kodwa maduzane uzokuqonda indlela oyizwa ngayo imizwa yakho.
Enye incazelo yephupho elinjalo lithi intombazane noma owesifazane osemusha angathola isipho sokubopha umkhonto kumuntu ongakazi ngokuphelele ephusheni elimtshela ukuthi uphumelela ngokuphumelelayo izinga lezemisebenzi. Umphuphi ngeke athole isimo sezenhlalakahle kuphela, kodwa uzophinde azuze ukuzimela kwezezimali nokuchuma kwempahla.
Okunye ukuhumusha kokulala
Uma ngesikhathi sokunikezwa kwakho uzizwe uzizwa udidekile futhi awukwazi ukuphendula ngokushesha, sekuyisikhathi sokuba uphakamise amandla akho emehlweni abanye. Zama ukwenza isenzo esibonisa ukungathí sina kwakho nomthwalo wakho wemfanelo, ngoba abanye bakubona ukuthi ungumuntu ongenangqondo futhi omfushane. Uma uphendule ngokuvumelana nesiphakamiso esitholiwe, uzojabulela inhlonipho yabanye ngenxa yobuhle obuhle kanye nekhono lokusiza labo abaswele.
Yona kanye isicelo somuntu ukuxhuma isiphetho sakhe nawe akusona uphawu oluhle kakhulu. Kakade esikhathini esizayo esiseduze ekuphileni kwakho kuzoqala uchungechunge lwezinhlupho nezinkinga ezincane. Ngenhlanhla, ayikwazi ukukuvimbela ekufinyeleleni okufunayo, kepha uqinise kuphela ukuthanda kwakho namandla wamlingisi.
Indoda eshadile eyabona ephusheni ukuthi iphinde inikeze umfazi wayo ovunyelwe ukushada kufanele iqaphele izinkinga emsebenzini. Uma ungathathi izinyathelo ngesikhathi futhi ungagcini imizwelo yakho, kokubili emsebenzini nasekhaya, ungalindela imicimbi emibi kakhulu. Okokuqala, ukubhubhisa umsebenzi wakhe, futhi okwesibili - ukuhlukanisa nomkakhe.
Kusukela endaweni yokucabanga kwengqondo, iphupho lapho owesifazane ngokwakhe enza khona isipho kumfana wakhe osemusha uthi usevele ekulungele ukuziphatha ubudlelwane ezingeni elisha futhi angeke alinde isinyathelo esinjalo esithandweni sakhe.
Kukhona amaphupho angavamile lapho intombazane noma umfana enza ukunikela ngezandla nezinhliziyo kumalungu obulili bakhe. Njengoba eqinisweni umphuphi noma umphuphi uvame ukujwayela kwendabuko, leli phupho lifanekisa ukunganeliseki okuphelele ngocansi kanye nesifiso sokuletha izinzwa ezisha futhi ezingavamile ukusondelana.
Futhi nakuba amaphupho anjalo ejabulisa kakhulu ubulili obuhle kakhulu, ungabheki njengezibonakaliso ezingenangqondo yokuthi iqiniso elizokwenziwa ngomshado lizokwenzeka empeleni. Ngakho-ke, ukuhumusha okulungile kwalokho okwakubonakala ngesikhathi sokuphumula ebusuku kubaluleke kakhulu.
Itafula Lonyaka Omusha 2015 Izimvu, zokupheka nezithombe
I-Horoscope ngo-February 2018 - owesifazane-iTaurus - kusukela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Indlela yokuyeka ukubhema futhi ungatholi amapounds engeziwe
Iziphi izinwele zezinwele ezithathwa ngabesilisa kakhulu?
Indlela yokufunda ukugcina umyalelo endlini?
Uma ingane ingalaleli okufanele ukwenze?
Amaphikishi we-cocktails ngoMashi 8
Ukupheka izitsha ezivela ku-hare
Ubuhle ngesi-Italian: i-mouthtick entsha "uSophia Loren No. 1" kusuka kuDolce & Gabbana
Ukuhlengwa komlobokazi, umbhalo
Uyazi kanjani ukuthi ubani ophambi kwakho?